Dihin’olon-tokana : hitondra ny « Espéranto » any Tokyo i Gwen Rakotovao | NewsMada
Dihin’olon-tokana : hitondra ny « Espéranto » any Tokyo i Gwen Rakotovao
Mpanakanto teratany malagasy anisan’ny manana ny maha izy azy any ivelany i Gwen Rakotovao. Tsy mitsaha-mikaroka sy mamorona ity tanora mpiangaly soradihy ity.
Fantatra fa na mbola any amin’ny septambra 2017 aza ny hetsika hotanterahiny, efa any Tokyo, Japon, izy ankehitriny manomana fampisehoana an-tsehatra hanehoany ilay soradihin’olon-tokana nampitondrainy ny lohateny « Espéranto ». Hetsika hatrehin’i Yuki Fukui (tale artistika) sy ilay mpandihy teratany japoney, Asaio Hisai.
Hanana endrika fifampizarana ny fanehoana ny soradihy « Espéranto » any Japon. Manamafy io rahateo ny votoatin’ny namoronana ity soradihy ity satria hanamarika ny kolontsaina malagasy sy frantsay izay manana ny akony ao amin’i Gwen Rakotovao, amin’ny maha mpanakanto azy sy amin’ny maha olona miaina anatin’ny fiarahamonina azy. Hafatra lehibe ampitainy anatin’ny « Espéranto » rahateo ny fisian’ny fanantenana ho an’izao tontolo izao mba ho tsara sy ho mendrika.
Teraka tany Rouen Normandie i Gwen Rakotovao. Nanomboka ny taona 2007, nifindra tany New-York izy taorian’ny nahazoany ny mari-pahaizana bakalorea siantifika ny taona 2004. Nianatra manokana momba ny dihy sy ny soradihy izy hahafahany hampianatra. Na tsy nieritreritra loatra ny hijanona ela any Etazonia aza izy, zary monina any hatramin’izao. Tao rahateo no anisan’ny nahazoany ny mari-pahaizany, toerana iasany, nananganany ny Gwen Rakotovao Compagny.